Warar Hordhac ah oo laga helaayo Qasaaraha ka dhashay Qarax saakay Afgooye ka dhacay iyo Weerarkii shabaabku shalay kusoo qaadeen – Kismaayo24 News Agency
Warar Hordhac ah oo laga helaayo Qasaaraha ka dhashay Qarax saakay Afgooye ka dhacay iyo Weerarkii shabaabku shalay kusoo qaadeen
by Tifaftiraha K24 24th January 2017 052
Warar dheeraad ah ayaa waxa laga helaya Qarax xoogan oo saakay ka dhacay Dagmada Afgooye ee Gobolka Shabeelada Hoose.
Qaraxa oo ahaa Miino dhulka lagu aasay ayaa Waxa uu ka dhacay Fariisin Ciidamada Dowlada ku leeyihiin Dagmada Afgooye sida ay sheegeen Saraakiisha Amniga.
Inta la xaqiijiyay Qaraxa waxaa ku Nafwaayay ilaa 5 Askari halka ay dhaawacmeen 4 Kale oo Ciidamada Dowlada ka tirsan .
Qaraxa wuxuu dhacay Aroor hore Saakay oo Talaado ah waxaana sheegtay Alshabaab iyadoona shabaabku ay sidoo kale ka hadleen Weerar ay shalay gabal dhicii xoogagooda ay kusoo qaadeen Gudaha Dagmada Afgooye.
Shabaabku waxa ay sheegteen in Dagaalkii shalay ay ku dileen 9 Askari oo Ciidamada Dowlada ka tirsan ayna la wareegeen qeybo kamid ah Dagmada Afgooye Balse war ka madax banaan sheegashada Alshabaab weli lama helin.
Dagmada Afgooye waxaa kusoo laab laabtay weerarada ay kusoo qaadaan dagaalyahanada ASlshabaab waana Markii seddexaad oo Mudo Bil gudaheed shabaabku weerar kusoo qaadaan Dagmada iyadoona ay Afgooye Noqotay Furin dagaal oo markasto weerar ku imaan kara.
War Cusub: Howlgalka AMISOM oo ku dhaw in uu Bur buro Kadib Markii Dowladaha Ciidankooda Joogaan ay…..
DEG DEG: Dagaal Culus oo la isku adeegsanaayo Hubka Noocyadiisa kala duwan ayaa Hada waxa uu ka socda Deegaanka…..
Xildhibaan Fiqi Gudoomiye Yariisow waxaan kasugeynaa.
Saraakiisha Ciidamada Booliiska Maamulka Galmudug oo Shaqo Joojin ku dhawaaqay.
Dhageyso: Madaxweynaha Jubbland oo Markii ugu horeysay si Cad u shaaciyay Caqabadaha hortaagan maamulkiisa iyo Tan ugu adag waxa ay tahay
Tifaftiraha K24 16th January 2017 16th January 2017